'आन्दोलनको बिचमा कुनै समय यस्तो आउँछ, जहाँ तेस्रो शक्ति बिकल्प बनेर अघि आउँछ'
डा बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री एव‌ं संयोजक, नयाँ शक्ति नेपाल शुक्रवार, भदौ १५, २०७५, १३:३४:०० मा प्रकाशित
माओवादी जनयुद्धको प्रमुख नेतृत्व मध्यका एक थिए बाबुराम भट्टराई, जो जनयुद्धको शान्तिपूर्ण संक्रमणपछि देशको अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री छँदा दशकौं बिस्तार हुन नसकेको काठमाडौंका मूलसडक विस्तारका कारण धेरैको स्यावासी पाए ।
प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई मितब्ययी बनाउने, बूढीगण्डकी जलविद्युत्त आयोजना संचालन गर्न अग्रसरता लिने, नेपाल वायू सेवा निगमलाई अन्तराष्ट्रिय उडान गर्न विमान थप्ने लगायतको कामको जस पनि पाए । युद्धकालमै माओवादीको लोकतान्त्रिकरणको सवाल उठाउँदा पार्टीभित्रै आन्तरिक वन्दी बनाइए । उनलाई डम्पिङ्ग गर्नुपर्छ भन्नेहरु अन्तत उनैले जाऔं भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आएर मन्त्री, उपराष्ट्रपतिको पटकपटक सत्ताभोगमा लिप्त भएका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन एमाओवादीलाई रातो स्टिकर लागेको घर भनेर संविधान जारी भएपछि बाहिरिएका उनी आफैंले ओत लाग्न मिल्ने बलियो घर त बनाउन सकेको छैनन् तर उनले भनेको रातो स्टिकर लागेको घर गर्लम्मै ढलेर बुइगलबाट चढेर एमालेको घरमा ओत लाग्न पुगेको छ । गोर्खाबाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग जनतापाटीका राजनीतिक संवाददाता कृष्ण गिरीले लामो कुराकानी गरेका छन्-
राजनीतिक दौडधुपमा कत्तिको व्यस्त हुनुहुन्छ ?
राजनीतिक एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । समाज रुपान्तरणमा लाग्ने मानिसहरु त्यसमा लागि नै रहन्छन् । लागि रहनुपर्छ । जिवन भनेको पनि गति हो । राजनीति त्यसको अभिव्यक्ति हो ।
नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गरेको र लोकतन्त्रका आधार मिच्दै गएको टिप्पणी आउन थालेको छ । तपाईलाई के लाग्छ ?
जुन समयदेखि राज्यको उत्पति भयो त्यसपछि लोकतन्त्रको उदय भयो । लोकतन्त्रलाई कति संकुचित बनाउने र कति विस्तार गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । सामन्तवादमा यसलाई परिवारको घेरामा राख्ने र संकुचन गर्ने काम भएको छ । त्यो बेला यो समुहको घेरामा थियो । पूँजीवादमा यसलाई अलि फराकिलो बनाइयो । अगुवा वर्गको पक्षमा रह्यो । यसलाई श्रमजिवी वर्ग, महिला, आदिबासी, जनजातिको पक्षमा लैजानुपर्छ भन्ने कुराको विकास भयो । विभेदमा परेकाहरुलाई पनि मुलधारमा लैजानुपर्छ भन्ने नै मुख्य सवाल हो ।
समाजवाद भनेको लोकतन्त्रको अझ उन्नत व्यवस्था हो भनेर बुझेका हौं । मार्क्सले समाजको ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या गर्नुभयो । द्वन्द्ववादी तरिकाले व्याख्या गर्नुभयो । यसरी हेर्दा समाज र राज्यको विधिलाई निरन्तर लोकतान्त्रीकरण गरेर यस्तो अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ जहाँ राज्य रहँदैन । प्रत्येक व्यक्ति र समुहले आफ्नो व्यवस्थापन आफैं गर्छ । राज्य र समाजका सबै क्षेत्रमा समान सहभागिता हुन्छ । राज्य नरहेपछि अन्याय–अत्याचार नै रहँदैन भन्ने विश्वास हो । तर आफुलाई मार्क्सका अनुयायी हुँ भन्नेहरुले नै भीमकाय नोकरशाही राज्य निमार्ण गरे । यसको भद्धा नक्कल आफुलाई नेकपा भन्ने साथीहरुले अहिले गरिराख्नु भएको छ ।
सरकारले लेनिनले समातेको बाटो लिने कि स्टालिनले समातेको भन्ने बहस पनि छ । संसदमा तपाईले एक दिन यही प्रश्न उठाउनु भएको पनि थियो । सरकार स्टालिनको बाटोमा गएको हो ? लोकतन्त्रका आधार मास्दै गएको हो ?
अहिलेको सत्तामा भएको नेकपा र यसको नेतृत्व जो छ, यसले रुप र खोलमा मात्र कम्युनिज्मको कुरा गर्छ । सारमा मार्क्सवादको आधारभूत चरित्र नै ग्रहण गर्दैन । यसले समाजवादी लोकतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने ने मान्दैन । उहाँहरु लोकतन्त्रलाई केही मानिस, परिवारको घेरामा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा नै मान्नु हुँदैन । विस्तार गर्नुपर्छ, समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने सहभागितामुलक लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँहरुले मुखले जनताको बहुदलीय जनवाद, २१औं शताब्दीको जनवाद भन्नुहुन्छ । स्टालिनको पालामा प्रयोग भएको नोकरशाही केन्द्रीकृत ढाँचा र प्रवृति अपनाएको छ । आचरण त्यही देखाइरहनु भएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र पूँजीवादी लोकतन्त्रले दिएको अधिकार पनि दिन चाहेको छैन । उनीहरुले भनेको ठाउँमा प्रर्दशन गर्नुपर्ने । उनीहरुले मानेको अदालतले नै छोड्ने आदेश दिँदा पनि पटक–पटक समात्ने । यो सरकार समाजवादको दिशामा होइन, नाेकरशाही प्रवृतिमा गइरहनु भएको छ । यसको पुष्टि विभिन्न घटनाक्रमहरुले देखाउँछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित गर्दै छन् । विधिको शासन पूँजीवादी भन्दा समाजवादमा धेरै उन्नत हुनुपर्ने हो । तर भएन । उनीहरुले भनेको ठाउँमा मात्र प्रर्दशन गर्न पाइने । अदालतले छोड्ने । सरकारले समात्ने । यो पंचायतकालको निरंकुशता जस्तै हो ।
अदालतले छोड्न आदेश दिएको खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई सरकारले पटक–पटक अदालत परिसरबाट समात्ने, बलात्कारका घटनामा सामेल भएकाहरुलाई नसमात्ने र पक्राउको माग गरेर सडकमा आएका जनतामाथि गोली चलाउने गरिरहेको छ, यस्ता घटनाले नेपाली समाजलाई कता लैजान्छ ?
यो लोकतन्त्रको विस्तार होइन, संकुचन हो । पंचायतमा हामीले सामान्य बोल्ने, लेख्ने र सभा गर्ने अधिकारको माग गर्दा पनि हामीलाई समातेर जेल हालिन्थ्यो । हामीलाई जनयुद्ध र बहुदलको मात्र होइन निरंकुश राजतन्त्रको पनि अनुभव छ । ती दिनमा अदालतले छोड्न आदेश दिन्थ्यो, प्रहरीले अदालत परिसरबाट गिरफ्तार गर्थ्याे । नक्कली मुद्धा लगाउँथ्यो । तर त्यत्रो आन्दोलन गरेर आएका व्यक्ति सरकारमा छन् । टाउकोको मूल्य तोकिएका मानिस छन् । यी मानिसबाट यस्तो घटना दोहोरिनु भनेको इतिहासप्रति नै भद्दा मजाक हो जस्तो लाग्छ । यो विडम्बना हो ।
दिनहुँ जस्तो बलात्कारका घटना भइरहेका छन्, यी घटना निराकरण गर्नु र समाधान गर्न ध्यान दिएको छैन । सत्ता उल्टै रेल र पानी जहाजका कुरा गर्छ । यो सबै देख्दा कस्तो लाग्छ ?
यी र यस्ता घटनाहरुलाई वस्तुगत र आत्मगत रुपमा हेर्नुपर्छ । पछिल्लो चरणमा विभत्स किसिमले नाबालकहरुको बलात्कार र हत्या भइरहेका छन् । यो समाजको दुष्टीकरण र भ्रष्टीकरण हो । यसो हुनुुको पछाडी लामो समयसम्म पूरानो व्यवस्था विरुद्ध लडेर, सामन्ती निरकुंश व्यवस्थाको विरुद्ध, विभेदकारी सत्ताका विरुद्ध जसरी जनताहरु लडे त्यो शोषित वर्ग, महिला, आदिवासी जनजातिको सहभागिताको लागि हो । तर आज हिजो आन्दोलनमा लागेका मानिसहरु नै द्रिभ्रमित भएको, आर्दश स्खलित भएको छ । समाज दिशाहीन भएको जस्तो छ । ठूलो सन्नाटा छाएको अनुभूति भइरहको छ ।
आत्मागतरुपमा हिजो कांग्रेस लडेको आन्दोलन होस्, कम्युनिस्टले गरेको आन्दोलन होस, आदिवासी जनजातिले गरेको आन्दोलन होस् सत्तामा पुगेपछि आन्दोलनका आधारहरु शिथिल भयो । हिजोको आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाहरु सत्ताको आडमा जनतामाथि दोहन गरेर निजी लाभ लिनेमा परिणत भए । राज्यसत्ताको दमनयन्त्र जनतामाथि प्रयोग गरीरहेका छन् । आत्मगतरुपमा गलत हर्कतको परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
वस्तुगत रुपमा समाज गतिहीनतामा फसेको छ । आत्मगतरुपमा हिजोका क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारीहरु नै यथास्थीतिवादीमा रुपान्तरण भएको देखिन्छन् ।
समाजमा एकतातिर यस्ता खालका समस्याहरु हुने, अर्कोतिर निर्वाचनमा नेपाली जनताले पूराना दलहरुलाई नै मत दिने, जनयुद्धको हिस्सा अहिले पनि ४० प्रतिशत सत्तामा छ तर परिवर्तनको अनुभूति नै छैन । यही तरिकाबाट समाज कहिलेसम्म गुज्रिरहने ?
परिवर्तन निरन्तर प्रक्रिया हो । क्रान्ति पनि निरन्तर प्रक्रिया हो । यो विभिन्न खुड्किलो र चरण हुँदै अगाडि बढ्छ । हामीले सात सालदेखि जनयुद्धसम्म पूँजीवादी लोकतन्त्रको एक चरण पूरा गरेका हौं ।संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका छाैं । यो भनेको पूँजीवादी लोकतन्त्रको एउटा चरण पार गरेका हौं । यसका पनि केही कमिकमजोरी छन् । त्यसमा टेकेर यो लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा अझैं उन्नत बनाउने । आर्थिक समाजिक रुपान्तरणको एउटा चरण पार गरेर समाजवादको चरणमा पुगिने हो ।
समाजको र इतिहासको आवश्यकता पनि यही हो । तर हामीमा भयो के भने हिजोको आन्दोलनकारी क्रान्तिकारीहरु नै सत्तामा पुगेपछि यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी चरित्र ग्रहरण गरेपछि बाँकी रहेका नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ताले, आन्दोलनमा रहेकाहरुले परिवर्तनको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसको निरन्तरताको लागि मैले उपलब्धिको जगमा टेकेर समाजलाई अझै उन्नत बनाउनको लागि प्रयास जारी राखेको छु । नयाँ रुपान्तरित अभियान चलाई राखेको छु । त्यसमा अन्य शक्तिहरुले पनि आ आफ्नो प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ ।
कांग्रेस, नेकपा (एमाले–माओवादी) जसलाई मुलधार पनि भनिन्छ, यसमा मधेशवादी दलहरु पनि यथास्थीतिवादमा फसेकाले अहिले यस्तो समस्या आएको हो । तर, समाजमा अग्रगमनको यात्रा कहिल्यै पनि रोकिंदैन । यो चलिरहन्छ । क्रान्ति भइरहन्छ । तर यो नयाँ रुपमा हुन्छ । रुप फेरिन्छ । पूरानै तरिकाले क्रान्ति परिवर्तन गर्छु भन्ने हो भने त्यो हुँदैन । समय र परिस्थितिले पनि हुँदैन । यसलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ । विर्मश पनि यसैमा हुनुपर्छ ।
समाजमा वर्ग छन्, वर्ग भएपछि संघर्ष पनि वर्गीय नै हुने भयो । खाइपाई आएका वर्गको विरुद्ध गरिने संघर्षको स्वरुप हिजोको जस्तै सशस्त्र हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा बहस हुन सक्छ । तर वर्गसंघर्षको औचित्य सकिएको निष्कर्षमा पुगिसक्नु भएको हो र ?
वर्ग संघर्ष हाम्रो जस्तो भर्खरै पूँजीवादमा सक्रमण भएको समाजमा गैर वर्गीय जातिय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र उत्पीडितहरुको संघर्ष निरन्तर चलिरहन्छ । नेपालमा मूलत सामन्तवादको अन्त्य भएको छ । राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ । एकात्मक राज्यको अन्त्य भएको छ ।
देश संघीय गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको छ । यसमा पनि अपूर्णता छ । पूर्णताको लागि दबाब दिने । राजनीतिक उपरी संरचनामा मिल्ने गरी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनमा केही समय जोड दिने । त्यसपछि उन्नत किसिमको राज्यव्यवस्था तर्फ जानु सही कार्यदिशा हो । यसको लागि सशस्त्र कि निशस्त्र भन्ने कुरा त संर्घषको रुप मात्रै हो । सत्ताधारी वर्गले कस्तो रवैया अपनाउँछ भन्ने हो ।
मार्क्सले भन्नु भएको छ ‘उत्पीडीत वर्गले शान्तिपूर्ण रुपमा अगाडि बढ्न चाहन्छ तर सत्ताधारी वर्गले कस्तो रबैया अपनाउाछ त्यसमा भर पर्छ ।’ शान्तिपूर्ण बाटाहरु रोकिए भने विद्रोह अथवा सशस्त्रको बाटो पनि अपनाउँछ । यो आम नियम हो, इतिहासमा जहाँ पनि लागु हुन्छ । एक चरणमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अपूणतालाई पूर्ण बनाउन शान्तिपूर्ण दबाब दिने । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरको लागि समाजलाई उन्नत चरणमा लैजाने । त्यसपछि समाजलाई र राज्यलाई समाजवादमा लैजानको लागि आवश्यक परे अर्को धक्का दिनुपर्छ । हामी वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरु यही तरिकामा अगाडि बढ्दै छौं ।
केही माओवादीका साथीहरु अर्को तरिकाले जान खोज्दै हुनुहुन्छ । माओवादी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने छ । समाज परिवर्तनशील छ । यी सबै शक्तिहरुले आ–आफ्नो तरिकाले आन्दोलन गर्दै जानुपर्छ ।
तपाईले पार्टी छोड्दा अब नेकपा माओवादी विघटन तर्फ जान्छ भन्नु भएको थियो, नभन्दै तपाईले भनेको केही वर्ष नपुग्दै माओवादी विघटन भएर एमालेसंग एकता गर्न पुग्यो । त्यसरी मोआवादी विघटनको लक्षण तपाईले कहिलेबाट देख्नु भएको थियो ?
म त कसरी बुझ्छु भने नेपालमा राणाको समयको प्रजापरिषददेखि कांग्रेस, एमाले र माओवादी आन्दोलनका एउटै कडी थिए । यसमा सबै भन्दा बढी शक्तिशाली माओवादी आन्दोलन नै हो । यो आन्दोलनको उच्च रुप पनि थियो ।
यसलाई ठिक ढंगले अगाडि त बढाउँदै लगेका हौं । तर यसमा दुईवटा कठिनाइ देखिए । बाह्य रुपमा नेपालको भूराजनीतिक कारणले पूर्ण रुपमा राजनीतिक परिवर्तन सम्पन्न हुन सकेन । ००७, ०४६ साल देखिका आन्दोलनका भू राजनीतिक जटिलता छन् । नेपालको भूराजनीति शक्ति सन्तुलनले गर्दा निर्णयमा पुग्न सकेन । यसले क्रान्तिकारीहरुलाई पनि पूर्ण रुपमा विजयमा पुग्न कठिनाइ भयो ।
अर्को आन्तरिक कठिनाई । जब पार्टी शक्तिशाली बन्दै गयो, माओवादी आन्दोलनले सजिलै पूराना शक्तिमाथि विजय हासिल गर्न सक्थ्यो । आन्दोलनमा पनि भित्रैबाट नयाँ वर्ग जन्मन्छ । आन्दोलनमा विभिन्न सोच विचारका मानिसहरु लाग्छन् । गतल प्रवृति, भ्रष्टीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो । त्यो माओवादीभित्र पनि जन्मेको मैले ०५६-०५७ बाट नै देखेको थिए । जब यो सत्ताको रुपमा ०५७ तिर जन्म्यो, त्यसपछि माओवादीमा नयाँ वर्ग जन्म्यो । यहाँ पनि नेतृत्वमा नयाँ वर्ग, शक्ति आफुमा केन्द्रीत गर्ने प्रवृति भयो । अलोकतान्त्रिक अभ्यासले भ्रष्टीकरण नै गर्छ ।
०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको हिसाब र बाह्यरुपमा पनि अनुकुल भएको अवस्थाले माओवादी आन्दोलनलाई पूँजीवादी गणतन्त्रमा पुर्याऔं भन्ने लागेर यसमा बहस भयो । त्यसको पहलकदमी लिँदा मेरो आलोचना भयो । तर अन्ततः त्यही आयौं हामी ।
मैले सोचेको थिएँ कि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जाऔं, नयाँ किसिमको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण गरेर समाजवादको लागि तयारी गर्दै समाजवादमा जाऔंला भन्ने धारण मैले अगाडि सारेको थिएँ । तर शान्तिप्रक्रियामा आएपछि भ्रष्टीकरणले धेरै उचाई लियो । नयाँ वर्ग पैदा भएको थियो । यो झन् बढ्यो । अनियमितामा गयो ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी नहुँदासम्म त मैले पनि त्यहीँ बसेर पहल गरें । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि त्यही रुपमा माओवादी आन्दोलन अगाडि जान सक्दैन भन्ने लागेको थियो । त्यही भएर मैले त्यो पार्टीसंग सम्बन्ध विच्छेद गररेको हुँ ।
न भन्दै तीन बर्षमा यो पार्टीले अहिले एमालेसंग एकता गरेको छ । पहिले पार्टी पूर्नगठनको नयाँ अभियान सुरु गरौं भन्दा मानेनन् । अहिले त पूरा पार्टी नै बिर्सजन गरिएको छ । अब पश्चाताप गर्नुभन्दा क्रान्तिकारीहरुले, परिवर्तनकारीहरुले पुनः संगठित भएर नयाँ तरिकाले अगाडि जान सकिन्छ । यसको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
नेकपाभित्र पूर्व माओवादीहरु रुपान्तरण हुने नयाँ तरिकाले राजनीति गर्ने संभावना कत्तिको छ, अथवा उनीहरु अहिलेको विचार विहिनतामा नै बस्छन् कि नेकपा भित्रैबाट परिवर्तनका लागि विद्रोह गर्छन् भन्ने लाग्छ तपाईलाई ?
यो त नेतृत्वमा भर पर्छ । नेतृत्वले आफुलाई कसरी लैजान्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । पूर्व माओवादी नेतृत्वले अब कसरी जाने भनेर सोच्ने प्रमुख हो । अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न सक्यौं भने र यसको नेतृत्व दिन सक्यौं भने नेकपाभित्र र नेपाली कांग्रेस भित्र पनि परिवर्तनगामी तप्का छ । ती अग्रगामी तप्कासंग आर्कषित हुन्छन् । यी सबै मिलेर नयाँ धुब्रीकरण हुनसक्छ भन्ने भन्ने मलाई लागेको छ ।
देशको परिस्थिति र वैचारिक नेतृत्व गर्न सक्यौं भने धेरै यूवाहरु, अग्रगामी पंक्ति यथास्थितिवादबाट बाहिर आउन सक्छन् । हिजोको कांग्रेस र कम्युनिस्टको ब्राण्ड आउँदो चुनावसम्म प्रष्ट हुने छ । यिनीहरुको भ्रष्टीकरण जनताले थाहा पाउने गरि बाहिर आउने छ ।
तपाईले सबैभन्दा पहिले माओवादी आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरणको कुरा उठाउनु भएको थियो, माओवादी जनयुद्ध जसरी चलेको छ, त्यसरी अब चल्न सक्दैन, बाहिरी शक्तिसंग पनि जोडिनुपर्छ, शक्ति सन्तुलनमा लैजानुपर्छ, लोकतान्त्रिक बाटोमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा नेतृत्व तहमा कुरा हुँदा माआोवादीको मूल नेतृत्व सहमत थियो कि थिएन ?
संसदीय राजनीतिको कुरा त होइन । यो पूरानो पाराको संसदीय राजनीतिले कहीँ कतै समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जान सकिन्छ भन्ने थियो । हामीलाई नयाँ रुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन्छ भन्ने थियो । हामीलाई लागेको भनेको नेपाली मोडेलको जनवाद ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो ।
नेपालको सन्दर्भमा २१औं शताब्दीको जनवाद हुनसक्छ भन्ने थियो । नयाँ जनवादमा गएर आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण पछि समाजवादमा जान सकिन्छ, यसको लागि उत्पादन शक्तिको विकास गरेर जान सकिन्छ भनेर कुरा भएको हो । अर्को बाह्य शक्तिसंग लडेर होइन कि आफैमा आत्मनिर्भर भएर शक्ति आर्जन गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने हो ।
बाह्य पूँजी अझ भारतको एकाधिकार पूँजीका विरुद्ध आन्तरिक शक्ति गोलबद्ध हुनुपर्छ भन्ने थियो । यसमा भारतसंग जोडरी खोज्नु भन्दा पनि आफु आत्मानिर्भर भएर जानुपर्छ भन्ने थियो । आफुले केही नगर्ने तर जोरी मात्र खोज्ने हो भने राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्ने थियो । यसबाट बचेर नै राजनीति लैजानुपर्छ भन्ने थियो ।
दोस्रो प्रचण्डजीको वरिपरि भ्रष्टीकरण भएर नयाँ वर्ग जन्मदै थियो । यो वर्गले पार्टीलाई धेरै अगाडि जान दिँदैन भन्ने भयो । नयाँ ढंगले यो पार्टीलाई लैजान सक्यौं भने, बाहिरका मानिसहरुलाई पनि यसको वरिपरि गोलबन्द गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका हाैं । बाह्य र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन गरेर जान सकिन्छ भनेर २०५८–०६१ सम्म आन्तरिक संघर्ष भयो । यही कुरालाई लिएर मलाई भौतिक रुपमा नै सक्ने योजना बनाए । ज्ञानेन्द्रसंग सत्ता बाडफाँडसम्मका कुरा चल्यो । तर त्यसमा कुरा नमिलेपछि न हो फछाडि फर्कनु भएको । मलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो । यतिमा पनि सफल नभएपछि मात्र बाह्र बुँदेमा आउनु भएको हो ।
तपाईले ०५८ बाट प्रचण्डको वरिपरि केही मानिसहरु भ्रष्टिकरण भएको देखे यसले माओवादी आन्दोलनलाई अगाडि लिन सक्दैन भन्नु भयो ,यसको स्वरुप कस्तो थियो ?
सत्ता बन्दै गएपछि अथवा शक्ति आर्जन गदै गएपछि २०५५ सालबाट नै सुरु भएको हो । चौथो विस्तारित बैठकबाट नै यो देखिएको हो । उहाँलाई केन्द्रीकृत गर्ने । देवत्वकरण गर्ने । शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने । नयाँ सत्ता र धन माथि एकाधिकार जमाउने कुरा भयो । यसको विरोध मैले गरें । यो स्टालिनवादी प्रवृति भयो भनेको हुँ । मैले यो प्रवृतिको विरोध गर्दा प्रचण्ड र बाबुरामको झगडा हो भनेर भ्रम फैलाउनु भयो । हाम्रो जस्तो समाजमा सबै कुरा कार्यकर्ताहरुले बुझ्ने कुरा थिएन । उहाँले भ्रम छर्न सफल हुनु भयो । हामीमा स्टालिनको प्रवृति आयो भनेको हुँ । तर पढेलेखेको बुर्जुवा भन्दै मेरो विरुद्ध भ्रम फैलाउनु भयो ।
उहाँको वरिपरि शक्ति केन्द्र निमार्ण हुँदै थियो त्यससंगको संघर्ष थियो । उहाँले प्रचण्डपथ भन्नुभयो । जबकी त्यसको आवश्यकता थिएन । तर लागु गर्नुभयो । पटकपटक संघर्ष भए । पालुङटारसम्म संघर्ष भयो । हामीले धेरै प्रयास गर्यौं यसलाईं रोकौ भनेर तर भएन ।
जनयुद्धकालीन मुख्य नेतृत्वमा तपाई पनि हुनुहुन्थ्यो, सुरुवातको समयमा माओवादी जनयुद्ध सैद्धान्तिक थियो, पछि विस्तारै फौजीकरण भयाे, नयाँ समाज नयाँ मानिस बनाउने भन्ने आन्दोलनमा व्यक्ति पुजा गर्नेसम्म भयो भन्ने छ के हो ? अमुक पात्रको समिक्षा पनि हुन नसक्ने अवस्था आयो, उनीहरुले जे बोले त्यही आधिकारिक हुने । यस्तो अवस्थामा प्राविधिक कुरा प्रमुख भयो सैद्धान्तिक भन्दा भनिन्छ नि हो ?
सशस्त्र आन्दोलनमा व्यवहारिक र प्राविधिक पाटो हाबी नै हुन्छ । तर सैद्धान्तिक वैचारिक बहस नभएका होइनन् । ठूला ठूला सैद्धान्तिक वैचारिक बहस पनि भए । ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी भ्रष्टीकरण भयो भनेर बहस भएको छ ।
स्टालिनको पालामा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कसरी डेभियसन भयो । स्टालिनको नियत खराब त म भन्दैन, तर त्यो समयमा भएको दोस्रो विश्वयुद्ध अन्य कारणले उहाँमा केही समस्या आयो ।
स्टालिनको पालामा कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी भ्रष्टिकरण भयो भनेर बुझ्नको लागि मैले जेनयूको लाइब्रेरीबाट ‘फम्र कमिन्र्टन टु कम्युफ्रम’ भन्ने पुस्तक ल्याएर हिसिलाजीमार्फत् प्रचण्डलाई दिएको हुँ । यो पुस्तकमा कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन भ्रस्टीकरण भयो भनेर राम्रो व्याख्या गरेको छ । उहाँले त्यो बुक पढेपछि दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको दस्तावेज लेख्नुभयो । उहाँले बोल्दा हलमा यो पुस्तक हिसिलाजीले दिएर पढेको हुँ भन्नुभयो ।
म स्टालिनको विरोधी होइन । स्टालिनको नियतमा खोट थियो म भन्दैन । कम्युनिस्टको जसरी डिभियर्सन भयो । सम्मान गर्छु स्टालिनलाई । दोस्रो विश्व युद्धको कारण र रुसको पिछडिएको कारणले कम्युनिस्ट पार्टीमा भ्रष्टीकरण भयो । तर स्टालिनबाट पाठ सिक्नु पर्थ्याे तर प्रचण्डजीले सत्ता र शक्तिको लागि भद्दा नक्कल गर्नुभयो । तर यसलाई पनि दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा अलिकति सच्यायौं । उहाँ त प्रचण्ड विचारधारा राखौं भन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर हामी प्रचण्डपथ भन्नेमा पुग्यौ । सारमा सच्यायौं तर रुपमा त्यति भएन । पछिल्लो समयमा त माओवादी आन्दोलनमा छोडेर जानुभयो । अहिले एमाले सच्चेको होइन, माओवादी एमालेमा विलय भएको हो ।
एमाले न सांगठनिक रुपमा न वैचारिक रुपमा सच्चेको हो । बरु माओवादीले आफ्ना मुद्धा, विचार सबै छोडेर एकतामा गएको हो । यसको नयाँ ढंगबाट परिभाषा भएन । यदि एमाले रुपान्तरण भएको हो भने कसरी कार्यदिशा एमालेको ,सिद्धान्त एमालेको, पार्टी संरचना एमालेको हुनसक्छ ?
म माओवादी आन्दोलनको रुपान्तरण होस् भन्ने चाहन्थे । बाहिर हेर्दा बाबुरामले माओवादी छोड्यो भयो भन्ने भयो, तर रुपमा प्रचण्डजीले माओवाद छोडेर एमालेमा जानु भयो । उहाँले खोल माओवादको ओडुनु भयो । तर सारमा पहिला नै छोड्नु भयो ।
जनयुद्धको समयमा परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन नयाँ किसिमको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त भन्नु भयो तर आजको दिनमा उभिएर हेर्दा चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करमा फस्यो माओवादी । संसदीय चुनाव पनि उदारवादको । संसदीय व्यवस्था पनि अनुदार खालको र कथित राष्ट्रवाद र यसको पिछलग्गु बन्ने माओवादी र यसका नेता कार्यकर्ता त्यसैको पिल्लर बन्ने अवस्था आयो । यसको परिकल्पनाकार तपाई हो, यसको समिक्षा गर्दा कस्तो लाग्छ ?
नीति र नेतृत्व मेल नखाएपछि यस्तो हुन्छ । विचारलाई नयाँ ढंगमा लैजान कोशिस गरेका हौं । तर प्रचण्डजीमा चरम व्यक्तिवादी महत्वकांक्षा नोकरशाही प्रवृतिले काम गरेको छ । उहाँ रुपान्तरण हुन सक्नुभएन । यसले कार्यकर्ताहरुलाई सही तरिकाले प्रशिक्षित गर्न सकिएन । कार्यदिशा के हो भनेर पनि बुझाउन सकिएन । यो बारेमा मैले ०५५–०५६ देखि नै बहस गरेको हुँ । अर्कोतर्फ किरणजीले इमान्दारीसाथ शास्त्रीय धारको र नयाँ जनवाद भन्नु भयो । उहाँहरुको पनि इमान्दारिता हो ।
तर प्रचण्डजीले दोहोरो भूमिका खेल्नु भयो । उहाँको रोल प्रष्ट भएन । उहाँको छद्म चरित्रले नै यो आन्दोलनलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्न रोक्नु भयो । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म त पुर्यायो । यदि प्रचण्डजीले दोहोरो भूमिका नखेलेको भए माओवादी आन्दोलन सुरुमा नै अर्कै तरिकाले जान्थ्यो । संघीय लोकतन्त्र र संविधानसभाबाट संविधान ल्यायौं यो सफलता नै हो ।
तर, पार्टीभित्र बुझाइको एकरुपता हुन्थ्यो भने पार्टी नयाँ ढंगमा अगाडि बढ्थ्यो । दोहोरो भूमिका नखेलेको भए अवसरवादी चरित्रले पार्टी फर्सी कुहिए जस्तो भयो । दिशाविहीन भयो । अब इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो । पश्चाताप होइन । प्रचण्डजीको पश्चगमनपछि पुनः नयाँ तरिकाको प्रतिक्रियावादी सक्रिय भएका छन् । अग्रगमनकारी शक्ति एक हुनुपर्छ । कांग्रेस र एमाले शक्तिमा आएका छन् । उनीहरु अग्रगामी शक्ति होइनन् ।
अब एउटा किसिमको आन्दोलन हुन आवश्यक छ । सक्रंमणकालको आन्दोलन भन्छु । त्यो सशस्त्र होइन । माओवादी र मधेशवादीहरुले गरेर ल्याएको आन्दोलनमाथि टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । दबाब दिनुपर्छ । यसको वातवरण बनिरहेको छ । यसलाई सही तरिकाले परिचालन गर्नुपर्छ ।
तपाईलाई पहिलो संविधानसभा विघटन गरेकोे आरोप लागेको छ । प्रचण्ड पनि यसलाई जोगाउने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने छ । तर एमाले कांग्रेसले हामीलाई नसोधेर विघटन गरे भनेर विभिन्न संचारमाध्यमा अन्तर्वार्ता नै दिए । अमुक शक्तिको आडमा बाबुरामले संविधानसभा विघटन गरेको आरोप छ । खासमा सत्य के हो ?
यो भन्दा बेइमान कुरा केही हुनै सक्दैन । जुन बाबुरामले ०५७–५८मा संघीय गणतन्त्र, संविधानसभाबाट संविधान ल्याउनुपर्छ भन्यो त्यही मानिसलाई संविधानसभाको विरोधी भनिनु कहाँसम्मको बेइमान हो भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ ।
जुन आमाले बच्चा जन्माउँछ त्यही आमाले बच्चाको अपहरण गरेर हत्या गर्न खोज्यो भन्ने अफबाह फैलाए जस्तो हो ।
संविधान सभाको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न नै मिल्दैन थियो । तर त्यो काम गर्न लगाइयो ।
मेरा बिरुद्ध भ्रम फैलाए । म प्रधानमन्त्री भएपछि ५०६८ साल मंसिर १० मा सर्वोच्च अदालतले (जसको नेतृत्व खिलराज रेग्मीले गरेका थिए) संविधानसभाको म्याथ थप्न नपाउने फैसला गर्यो । विस्तारै यसको रहस्य खुल्यो । उनी अरुको ग्राइण्ड डिजाईनमा रहेर यस्तो निर्णय गराएको रहेछ । यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन रहेछ । यी सबैको चाहना रहेछ माओवादीको नेतृत्वमा अझ संविधानसभाबाट संविधान जारी नहोस् भन्ने चाहना रहेछ ।
जेठ १४ गते जसरी पनि संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने थियो । यही भएर जेठ २ गते जुन सहमति भएको थियो त्यो सहमति केही साथीरुले सही ढङ्गले नबुझ्दा या पोल्टामा आएको छाडेर भूइँको टिप्ने लालसा राख्दा पहिलो संविधानसभा नै भंग भयो । मधेशी र आदिबासी जनताजाति समूदायका साथीहरुले यो कुरा राम्ररी बुझेनन् । जस्तो की ११ प्रदेश, कार्यकारी राष्ट्रपतिमा सहमति भएको थियो । तर यी साथीहरुले भागमा पस्किएको भन्दा बढी नै खान्छौं भन्दा थालमा भागमा केही पनि बाँकी नरहने अवस्था आयो । त्यो भएको भए जेठ १४ गते संविधान जारी हुन्थ्यो ।
मैले संविधानसभा जोगाउन जेठ ९ गते क्याबिनेटबाट संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णय गराएको थिएँ । एमाले र कांग्रेस मेरो सरकारमा आएको थियो । कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला थिए । उनीद्वारा मैले म्याद थप्ने प्रस्ताव पेस गर्न लगाएको थिएँ ।
तर, ९ गते राति नै सुशील कोइरालालाई उचालेर म्याद थप्न दिइएन । भोलिपल्ट सर्वोच्चमा मुद्धा हाल्न लगाइयो । खिलराज रेग्मीले जेठ ११ गते फैसला गरे म्याद थप्न नदिने भनेर । मैले १४ गतेसम्म धेरैसँग छलफल गरे । मैले भने अलिकति भएपनि संविधान जारी गरुँ । तर, कसैले मानेनन् ।
अन्तिम विकल्प थियो, संकटकाल लगाएर भएपनि संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने । तर यो कुरा पनि शेरबाहादुर देउवा भन्दा अरु कसैले मानेनन् । शेरबादुर देउवा पार्टीको प्रमुख ब्यक्ति पनि थिएनन् । थपमा सुवास नेम्वाङले १४ गते राति संविधानसभाको बैठक बोलाउनोस् भन्दा सहमति गर अनिमात्र बैठक बोलाउँछु भनेर अड्को थापे ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई मैले म्याद थप्न ल्याएको प्रस्ताव स्वीकृत नगर्नु भनिएको रहेछ । यो कुरा थाहा पाएपछि मैले संकटकाल पनि लगाउन सकिनँ । सबै ढोका बन्द भए । कानूनविद्हरुले सल्लाह दिए–१४ गते रातिबाट संविधानसभाको ढोका बन्द हुन्छ । यस्तो भयो भने संविधानसभाबाट पुनः संविधान बन्ने कुरा सधैंका लागि बन्द हुन्छ । यस्तो हुनुभन्दा पहिला नै मैले चुनावको मिति घोषणा गरेको हुँ ।
मैले त संविधानसभाबाट संविधान बन्ने बाटो जोगाएको हुँ । चुनावको मिति घोषणा गरेको भएर मात्रै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको हो । मैले चुनावको घोषणा गरेपछि मैले नै चुनाव गराउन पाउनुपर्ने हो । जिम्मेवारी मैले पाउनुपर्ने हो । जबकी राष्ट्रपति मैले ल्याएका कुनै पनि अध्यायदेश स्वीकृत नगर्ने अडानमा थिए । मैले गर्दा नै संविधानसभाबाट संविधान बनेको हो । मैले बाध्यात्मक रुपमा खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको हुँ । मैले संविधानसभाको लागि त्याग पो गरेको हुँ ।
खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षमा सबैभन्दा पहिले कसले सिफारिस गरेको थियो ?
यो कुरा धेरै नभनौ । आफै बुझ्नुोस् । मंसिर ९ गते म्याद थप्न नदिने फैसला गर्न लगाइयो । जेठ ११ गते पनि तीन दिनको लागि समेत म्याद नदिने पनि उनी नै हुन् । अथवा उनैलाई यसमा प्रयोग गरेका हुन् । अब यो कुरा बुझ्न गाह्रो भएन । उनी मैले सत्ता हस्तान्तरण नगरुन्जेल कसरी लागे यो कुरा बुझ्न सजिलो छ ।
अझ मेरो बिरुद्ध तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले त पटक पटक ‘कु’ गर्ने प्रयास गरे । मैले ल्याएका सबै अध्यादेश न स्वीकार गर्ने न अस्वीकार गर्ने गरेर अल्झाएर राखियो । यो कुरा उहाँ आफैले पनि स्वीकार्नु भएको छ कि मैले बाबुरामका बिरुद्ध ती अध्यादेशहरु सचेत ढंगले स्वीकार नगरेको भनेर ।
मैले पनि प्रधानमन्त्री छँदै धेरै ठाउँमा भनेको छु राष्ट्रपति यादवले मेरा बिरुद्ध कु गर्ने प्रयत्न गरेको हो । जुन मसंग धेरै प्रमाण छन् ।
दोस्रो संविधानसभाबाट जस्तो संविधान बन्यो, त्यो संविधान बनेको समयमा मधेशमा आन्दोलन थियो, संविधानप्रति असहमति थियो, देशमा महेन्द्रीय राष्ट्रवाद हावी थियो, संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलहरु विरुद्ध बोल्नु समेत पनि राष्ट्रघाती करार हुने अवस्था थियो । त्यस्तो समयमा संविधान जारी हुनासाथ माओवादी छोड्नुभयो । अहिले फर्केर हेर्दा त्यो समयमा माओवादी पार्टी छोड्ने अनुकुल समय थिएनछ भन्ने लाग्दैन ?
मैले २०६० साल लावाङ बैठकपछि भनेको हुँ । मेरो डेरा लावाङको खरिबोटमा थियो । संविधान जारी भएपछि, गणतन्त्र आएपछि मेरो र प्रचण्डको बाटो नै अलग हुन्छ भनेर टोपबहादुर रायमाझी, दिनानाथ शर्मा लगायतका साथीसंग भनेको थिएँ । संविधान जारी भएपछि प्रचण्ड र हाम्रो बाटो छुट्टिन्छ भनेको थिएँ । यो कुरा पछि दिनानाथजीले एउटा पत्रिकामा पनि लेख्नुभयो । त्यसैले संविधान जारी भइसकेपछि नयाँ चरणको लागि नयाँ अभियानमा लाग्नु नै पथ्र्यो । मैले जे गरें ठिक गरें भन्ने लागेको छ ।
अब त कति बचाउन सकिन्छ भन्ने थियो । दोस्रो संविधानसभामा शक्ति सन्तुलन पनि फेरिइसकेको थियो । धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र, संघीयताको पक्षमा भन्दा पनि अर्को धारको शक्ति हाबी भइसकेका थिए । विरोधीहरु बढी नै हावी भइसकेका थिए । यस्तो अवस्थामा धेरै भन्दा धेरै उपलब्धि बचाउनु नै हाम्रो पहिलो काम थियो ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिगामी शक्तिहरुले जनतामा भ्रम छर्ने अवसर भने पाए । तर तिनको भ्रम, राष्ट्रवाद आज यहाँसम्म आउँदा थाहा भइसक्यो नि । चुनावमा यही राष्ट्रवादको हौवा फैलाएर सत्तामा पुग्ने मात्र हो भन्ने कुुरा प्रष्ट भइसक्यो । यिनको राष्ट्रवाद कति नक्कली रहेछ भने एउटा ताउलोमा पसेको स्याल जस्तै । ताउलोमा पसेको स्याल ताउलोको रंग सरेर निलो भएछ । उसले आफु अब राजा भएँ भनेर हल्ला फैलाएछ । अरु स्याल आएर कराएपछि त उ पनि हुइया हुइया गरेछ । त्यस्तै भएको छ यहाँ ।
तपाई प्रधानमन्त्री भएको समयमा थापाथली नजिक वागमती किनारमा भएको सुकमबासी बस्तीमा, त्यो पनि पानी आएको मध्य वर्षात्मा डोजर चलायो भन्ने आरोप छ । वास्तविकता के हो ?
म एक जना आर्केटेक्चर, प्लानर भएकाले काठमाडौलाई केही कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । एउटो सॉघुरा सडकलाई पूरानो काठमाडौंको रक्षा गर्दै अन्य सडक फराकिला बनाउनुपर्छ भन्ने । अर्को वागमती लगायतका नदीहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ सरसफाई गुर्नपर्छ र यसको किनारामा बसेका सुकुम्बासी बस्तीहरुलाई अन्य ठाउँमा लागेर सुरक्षित बसाउने भनेको थिएँ । यो योजना अनुसार मैले सुकुम्बासी बस्तीको लगत लिन लगाए । असली सुकुम्बासीको लागि इचङ्गुनारायणमा आवास बनाउन लगाएँ ।
जो खास सुकुम्बासी हो, तिनलाई आवास दिने तयारी भएको थियो । एक महिनापछि त म ती सुकुम्बासीहरुलाई सार्दै थिएँ । तर त्यही समयमा रहस्यमय ढंगबाट मलाई थाहा नै नदिई केही भूमाफियाहरुले त्यो समयका भौतिक, योजना र गृहमन्त्रीसंग मिलेर डोजर लगाए वागमती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा । मैले डोजर लगाउनको लागि मलाई बहुला कुकुरले टोक्नुपर्छ । म दोस्रो दिन गएर माफी मागेँ । जबकी मैले यस्तो काम गरेको थिइनँ । यो भन्दा पहिला मैले सुकुमबासीहरुलाई चोभारमा राख्न खोजें त्यहाँ पनि आफ्नै पार्टीका मानिसले यहाँ सुकुमबासी राखे अपराधी गतिबिधि हुन्छ भन्दै विरोध गरे ।
त्यहाँबाट मैले ललितपुरमा सार्न खोजें त्यहाँ पनि हाम्रो पार्टीका नेता अझ विशेष गरेर पम्फा भुसालले एमाले कांग्रेससंग मिलेर विरोध गर्नुभयो । आज मैले सुरु गरेको सुकुम्बासी आवास भवनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई राख्ने योजना बनाएको सुनेको छु ।
अहिलेको सरकारले सुकुम्बासीको आवासमा मुख्यमन्त्री राख्दै छ । यो भन्दा ठूलो बेइमानी हुने देश कहीँ होला ?
तपाई नेकपाले नेपाली समाजको अन्तर्विरोध हल गर्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो.....
अहिले संसारमा ‘क्रोनी क्यापिटीलिज्म’ हावी छ । यो भनेको हामी कहाँको आसेपासे पूँजीवादी राज्यसत्ता हो । यो प्रवृत्ति नेकपामा भरपूर मात्रामा छ । पार्टीका नेतृत्वमा नै कमिसनखोरहरुको समुह छ । यसको नै राज्य सत्तामा हालीमुहाली छ । फलस्वरुप देशमा अनेक खालका विसंगति ल्याएको छ । कम्युनिस्टको खोलभित्र अत्यन्त गैर कम्युनिस्ट हर्कत गरिरहेका छन् । अब यसको विकल्प कांग्रेस हुन सक्दैन । यो पहिला नै बद्नाम भएको पार्टी हो । अब जनताले तेस्रो विकल्प खोज्छ । यसको निमार्ण गर्नुपर्छ । देश अहिले प्रसव पीडामा छ । मैले यसमा कति योगदान गर्न सक्छु, म आफ्नो तर्फबाट गर्नेछु ।
चलिरेका पार्टीको विकल्प संभव छ भनेर लाग्नु भएका तपाईहरुबिच पहिलो चरणमा कार्यगत एकता गरेर जाने र कालान्तरमा यी चलिरहेका पार्टीको विकल्पको शक्ति बन्ने संभावना कत्तिको देख्नु भएको छ । यसमा के कति काम गरिराख्नु भएको छ ?
राजनीतिक रुपमा प्रस्ट पार्नको लागि अध्ययनमा लागेको छु । यसैको लागि म केही दिन पहिला युरोप र अमेरिका घुमेर आएँ । पछिल्लो समयमा विश्वमा के कस्ता अनुभवहरु छन् भनेर हेरेर अध्ययन गरेको छु ।
पछिल्ला ज्ञान विज्ञानको विकास के कति भएको छ भनेर बुझेर आएको छु । अहिले वैचारिक र राजनीतिक तयारी गरिरहेका छौं । माओवादी आन्दोलन जोगाउने हुटहुटीका साथ लागेका साथीहरु पनि केही नयाँ गराैं भनेर लाग्नु भएको छ । वैकल्पिक शक्तिहरु नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्दै छौ । सबै कुरा आन्दोलनको बिचबाट तय हुने हो । यो सरकारका विकृति विसंगतिका बिरुद्ध सहकार्य गरेर जानुपर्छ । आन्दोलनको बिचमा कुनै समय यस्तो आउँछ जहाँ तेस्रो शक्ति बिकल्प बनेर अघि आउँछ ।
डा बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री एव‌ं संयोजक, नयाँ शक्ति नेपालबाट थप
'आन्दोलनको बिचमा कुनै समय यस्तो आउँछ, जहाँ तेस्रो शक्ति बिकल्प बनेर अघि आउँछ' समाजवाद भनेको लोकतन्त्रको अझ उन्नत व्यवस्था हो भनेर बुझेका हौं । मार्क्सले समाजको ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या गर्नुभयो । द्वन्द्ववादी तरिकाले व्याख्या गर्नुभयो । यसरी हेर्दा समाज र राज्यको विधिलाई निरन्तर लोकतान्त्रीकरण गरेर यस्तो अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ जहाँ राज्य रहँदैन । शुक्रवार, भदौ १५, २०७५, १३:३४:००
जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा प्रभावकारी भएनः कृष्ण प्रसाद आचार्य